Act 6 | Shona | STEP | Zvino namazuva iwayo, vadzidzi vachiwanda, vaJudha, vaitaura chiGiriki, vakanyunyutira vaHebheru, nokuti chirikadzi dzavo dzaidarikwa pakugoverwa kwomusi mumwe nomumwe.
Vanosanangura varume vanomwe kuchengeta chirikadzi.
1 Zvino namazuva iwayo, vadzidzi vachiwanda, vaJudha, vaitaura chiGiriki, vakanyunyutira vaHebheru, nokuti chirikadzi dzavo dzaidarikwa pakugoverwa kwomusi mumwe nomumwe. 2 Zvino vanegumi navaviri vakadana vadzidzi vazhinji, vakati: Hakuzakafanira kuti isu tirege shoko raMwari, tishumire pamatafura. 3 Zvino hama dzangu, sanangurai pakati penyu varume vanomwe, vanopupurirwa zvakanaka, vazere noMweya Mutsvene novuchenjeri, vatingaisa pabasa iri. 4 Asi isu tichatsungirira pakunyengetera napabasa reshoko. 5 Shoko iri rikafadza vazhinji vose, vakasanangura Stefano, murume wakanga azere nokutenda noMweya Mutsvene, naFiripo, naProkoro, Nikanori, naTimoni, naPamenasi, naNikorasi, muproserite weAntiokia. 6 Vakavaisa pamberi pavaapostora; vakanyengetera, vakaisa mavoko pamusoro pavo. 7 Shoko raMwari rikakura, vadzidzi vakawanda zvikuru paJerusarema; navaPirisita vazhinji vakagamuchira kutenda.
8 Zvino Stefano, azere nenyasha nesimba, akaita zvinoshamisa nezviratidzo zvikuru pakati pavanhu. 9 Ipapo vamwe vavo, vaiva vesinagoge rainzi ravasununguki, navaKureni, navaAreksandira, naveKirikia, neveAsia, vakasimuka vakaita nharo naStefano. 10 Asi vakanga vasingagoni kukunda kuchenjera kwake, noMweya waitaura naye. 11 Ipapo vakamutsa varume, vaiti: Takamunzwa achitaura mashoko anomhura Mosesi naMwari. 12 Vakakurudzira vanhu, navakuru, vakamuisa kumakurukota. 13 vakaisapo zvapupu zvenhema, zvaiti: Munhu uyu haaregi kutaura mashoko anomhura imba iyi tsvene nomurairo. 14 Nokuti takamunzwa achiti: Uyu Jesu weNazareta uchaparadza nzvimbo iyi nokushandura tsika dzatakapiwa naMosesi. 15 Zvino vose vakanga vagere pamakurukota, vakamutarisisa, vakavona chiso chake chakaita sechiso chomutumwa.